Framework — MYSTERY ZILLION
December 2014 edited December 2014 in PHP
Framework အကြောင်းလေ့လာချင်ပါတယ်။ ဘယ် framework ကို စလေ့လာရပါမလဲ။ မည်သည့် framework ကအသုံးပိုများပါသလဲ ။ သိတဲ့သူများ လမ်းညွှန့်ပေးပါ။
December 2014 edited December 2014 Administrators
အောက်မှာပြထားတဲ့ Mashable က Article ကိုကြည့်ပါ Example အဖြစ် လက်တလော popular ဖြစ်နေတဲ့ Framework တွေကိုပြထားတယ် လေ့လာတာက ဘယ်ဟာက စလေ့လာသင့်တယ်တော့ မရှိပါဘူး Framework ဆိုတာက အလုပ်သဘောအရ သင့်လျော်ရာသုံးတာ လွယ်လို့ခက်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
တခုအကြံပေးရမှာက စပြီးတော့ လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ PHP Language နဲ့ပဲ အရင်ဆုံး ကျွမ်းကျင်အောင်ရေးပါ အထိုက်အသင့် ရေးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ Framework တခုခုယူသုံး အဲဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်ဟာသုံးသုံးရတယ် Framework ဆိုတာက လွယ်အောင်လုပ်ထားတာ ခက်ခက်ခဲခဲ ဘာမှမရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အရင်ဆုံးတော့ Framework မသုံးပဲ ရေးတတ်ဖို့လိုမယ် မဟုတ်ရင်တော့ Framework တခုစသုံးဖို့ အချိန်အကြာကြီးယူရမယ် သုံးတတ်သွားလို့ အလုပ်သဘောအရ တခြားဟာသုံးဖို့ လိုတယ်ဆိုရင် တခေါက်အစအဆုံး ပြန်အချိန်ယူရပြန်နဲ့ သံသရာလည်နေလိမ့်မယ်။
Thanked by2kaungkhantmintun thal_thal
framework မသုံးတတ်ပဲ PHP ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ OOP , Design Pattern စတာတွေကို နားလည်ရင်တော့ ဘယ် framework မဆို လွယ်လင့် တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
framework က အများအားဖြင့် ကိုယ့် အလုပ်မှာ ဘာနဲ့ အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဖန်တီးရတာပဲ။
အခုနောက်ပိုင်း နာမည်ကြီးလာတာကတော့ laravel framework ပါ။ မြန်မာ laravel ကို http://laravelmyanmar.com မှာ ကြည့်နိုင်တယ်။ အခြေခံကောင်းကောင်း မရှိသေးခင် framework သုံးတဲ့ အခါမှာ တချို့ အရာတွေက နားလည်ဖို့ ခက်ကောင်းခက်မယ်။
အရင်တုန်းက CodeIgniter နာမည်ကြီးပေမယ့် အခု laravel နာမည်ကြီးတယ်။ နောက်တစ်နှစ် ဘယ် framework နာမည်ကြီးမယ် ဆိုတာကို မသိနိုင်ဘူး။ framework ကို စလေ့လာမယ်ဆိုရင် ပြီးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ထင်တာပဲ။
ဒါကြောင့် PHP မှာ OOP နဲ့ Design Pattern အရင် လေ့လာပါ။ အခြေခံရပြီ ဆိုရင်တော့ framework တစ်ခုကနေ တစ်ခု လွယ်လင့် တကူ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ပုံမှန် RESTFul API အတွက် ဆိုရင် slim framework ကို အသုံးပြုပြီးတော့ web app ထိ ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် laravel လိုမျိုး framework ကို သုံးဖို့ စဉ်းစားပါတယ်။
Thanked by 1 kaungkhantmintun
December 2014 edited December 2014 Registered Users
ကျွန်တော်က Java သမားပါ။ ဒါပေမယ့် Framework ဆိုတာနဲ. ပါတ်သတ်လို.နည်းနည်းလေး ပြောကြည်.ချင်လို.။ Framework ဆိုတာကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုနားလည်သလဲ ဆိုရင် developer တွေအတွက် အဆင်သင့် နားလည်လွယ် ၊ ပြုလုပ်ရလွယ် ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိန်းရလွယ်အောင် ရယ်ဒီမိတ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ software package တွေလို.ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Framework တွေသုံးဖို.ဆိုတဲ့နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ပင်မ Language ကို အဓိက ကျွမ်းကျင်ဖို.တော့အရေးကြီးပါတယ်။ Java နဲ. ပါတ်သက်တဲ့ framework တွေသုံးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို.အနေနဲ. Java Language ကိုကျွမ်းကျင်သိနားလည်နေဖို.တော့လိုပါတယ်။ တစ်ခြားတစ်ခြား Language တွေလည်း ထို.အတူပါပဲ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Framework တွေဆိုတာက Generalize လုပ်ထားကြတာလေ ။ ကိုယ့်ရဲ. requirement နဲ. ကိုက်ချင်မှကိုက်မှာပေါ့ ။ အဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးသားရမှာမျိုးတွေလိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ ပင်မ language ကို ကျွမ်းကျင်နားလည်မှု မရှိရင် ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ ပြောရရင် Customize လုပ်ဖို.ပေါ့။
နောက်ပြီး Framework တွေကို ရွေးချယ်ရာမှာ ကိုယ့်ရဲ. requirement နဲ. ကိုက်ညီမှုရှိဖို.လဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိုးပျံအောင်ကောင်းနေမယ့် Framework ဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ့် requirement နဲ. ကိုက်ညီမှုမရှိရင် မသုံးပါဘူး။လူသုံးများတိုင်းလည်း မသုံးပါဘူး။ အဲတာအရေးကြီးပါတယ်။ အဓိက စဉ်းစားရမှာက ကိုယ့်ရဲ.လိုအပ်ချက် ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အတိုင်းအတာကို သိရပါမယ်။ ကောင်းတိုင်းမသုံးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို. Java မှာဆိုရင်ရှိတယ် တစ်ချို. Framework တွေ ၊ Secure အရမ်းဖြစ်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံက connection နဲ.ဆိုအဆင်မပြေဘူး။ တစ်ချို.ကျတော့လည်း ရေးရတာ ၊ maintainance လုပ်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ တစ်ခြား framework တစ်ချို.နဲ. အဆင်မပြေဘူး ။ တစ်ချို. Framework တွေ ဒီဇိုင်းအပိုင်း အရမ်းလွယ်ကူတယ် ၊ ဒါပေမယ့် free မရတာမျိုး ။ တစ်ချို. ကျတော့ ကောင်းမယ့်ပုံပေါ်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် framework ကိုယ်တိုင်က Bug ရှိတာမျိုးတို. reference လုပ်စရာ Documentation နည်းတာမျိုးတို. စသည်စသည် အခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်။
Framwork တွေမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ အားနည်းချက် ၊ အားသာချက် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက Framework တစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို.ဆိုရင် အရင်ဆုံး ပင်မ language ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရပါမယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်သုံးမယ့် Framework ရဲ. pros and cons တွေသိထားရပါမယ်။ ဘာတွေနဲ. ဆို အဆင်မပြေဘူးလဲ ဆိုတာသိရပါမယ်။ Framework ရဲ. support ပေးနိုင်တဲ့ range ကို သိရပါမယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ. requirement အတွက် ဘယ် Framework ဟာ အသင့်လျော်ဆုံးလဲ ဆိုတာသိအောင် အတွေ.အကြုံရှိသူများထံမှာ မေးမြန်းစုံစမ်းလေ့လာပါလို.အကြံပြုပါတယ်။